Mr Programmer (www.mr-programmer.com): ဦးဏှောက်ယိုစီးမှုပြဿနာများ
ဒီနေ့ရုံးမှာ အင်တာနက် Connection ပျက်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ blog အတွက် စာလေးနည်းနည်းရေးဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေတိုင်း စင်္ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ရန်ရောက်ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ရန်ကုန်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရောင်ရင်းများအကြောင်းပါ။ တစ်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းက အမှုဆောင်တစ်ယောက် ဒီမှာ ရောက်နေတာနဲ့ သူနှင့်ထမင်းသွားစားဖြစ်ကြပါတယ်။ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ပဲ. သူကိုတောင် စ သလိုနဲ့မေးလိုက်မိသေးတယ်။ အန်ကယ်.. ရန်ကုန်မှာ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာတွေကျန်သေးရဲ့လားလို့။ သူက ရီမောပြီးပြန်ပြောတယ်။ ရှိတယ်.. စစ်တပ်ထဲမှာတဲ့။
ကျွန်တော်အနေနဲ့သူအဖြေကိုမအံ့သြမိပါဘူး။ ပညာရှင်ဆိုတာ ပညာရှင်လိုဆက်ဆံမှ ပညာရှင်လို အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ ပညာရှင်တွေတော်တော်များများသိမှာပါ။ နောက်ပြီးပိုဆိုးတာက အခုလိုဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ အပြောင်းအလဲတွေးကလည်းမြန်မှမြန်။ အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေ ကို အနောက်က အမှီလိုက်နိုင်မှ တော်ရုံကျမှာ က အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတည်ဆောက်မယ့် ခေတ်လူငယ် တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလိုက်ဖို့အတွက် အင်တာနက်ကြတော့ လည်း websites အများပြားကိုလည်းပိတ်ထား၊ ကမ္ဘာရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကိုရောက်နေတဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လိုတဲ့ အီးမေလ်ကျတော့လည်းပိတ်ထားနဲ့ တော်တော်ကို အဆင်မပြေဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒီကြားထဲ လျှပ်စစ်မီးကလည်းမမှန်၊ ကုန်းဈေးနှုန်းကကြီးပြီး ရတဲ့လစာက နည်း။ ဟိုဟာလုပ်လည်းလုပ်ပြန်ပြီ၊ ဒီဟာလုပ်လည်းလုပ်ပြန်ပြီ။ ဟူး….ရေးရင်နဲ့တောင်ချွေးကြလာပြီ။
သူတို့ကိုသာာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်နိုင်ခွင့်တွေ အခွင်အရေးတွေသာပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ အိုးမကွာ၊ အိမ်မကွာနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်ရေး၊ အောင်မြင်မှုရရှိရေး အတွက် တတက်တအားပါဝင်နိုင်ကြမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူငယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည့်ရဲ့ အနာဂတ်စွမ်းအင်မလို့ပါ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေဟာ အစွမ်းအစရှိတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းရဲမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေ မှာတောင် ဒီလောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ကြတာဆိုတော့။
ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့လူငယ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေဟာ သူတို့နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကို တဖြည်းဖြည်းစွန့်ခွာနေကြပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့..ရှင်းရှင်းလေးပါ။သူတို့ကိုမလိုတော့ ..လိုတဲ့လူဆီသွားရမှာပဲလေ။
ယခုကျွန်တော်နေထိုင်ရာစင်ကာပူဆိုတဲ့ နိုင်ငံလေးတစ်နိုင်ငံမှာတောင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အောက်ခြေမှ ပညာရှင်အထိ ၃သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆို ဘဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံး ၄ သန်းနီးပါ်းရှိတဲ့ အချိန်မှာ ၃ သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့. အနည်းဆုံး ၈% လောက်ဖြစ်နေပြီ။
ပိုဆိုးတာက စင်ကာပူအစိုးရက အခုအချိန်မှာ သူ့နိုင်ငံမှာ လူဦးရေတိုးပွားအောင်ဆိုပြီးတော့ တခြားနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကို မက်လုံးတွေပေးပြီး သူတို့နိုင်ငံသား၊ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက် မှတ်တွေပေးနေတော့ ပိုလို့ဆိုးပြီးပေါ့။ အခုဆိုမြန်မာသံရုံများ လျှောက်လွှာတွေအများကြီးပါပဲ။
တခြားတော့မထင်ပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မှစွန့်လွှတ်ကြောင်း လျှောက်လွှာတွေပါ။
ဘာပြောပြော စင်ကာပူကတော့ အမြတ်ရသွားတာအမှန်ပါပဲ။ လုပ်နိုင်၊ကိုင်နိုင် အစွမ်းအစရှိပြီးပညာတတ်အများ အပြား ကို အဆင့်သင့်ရသွားလို့ပါ။ သြော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ရှုးံတာလားမြတ်တာလား ဆိုတာ စဉ်းစာကြည့်ကြပါ။
ဒါတောင် စင်ကာပူတစ်နိုင်ငံပဲရှိပါသေးတယ်။ အခြားနိုင်ငံအများအပြားမှာလည်း မြန်မာအများအပြား ရောက်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီဟာ က အစားထိုးလို့မရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဦးဏှောက်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကို လက်လွှဲယူမဲ့ အမိနိုင်ငံရဲ့ ပညာတတ်တွေဟာ အခြားနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ဖို့စွန့်ခွာနေကြလို့ပါ။ စွန့်ခွာတယ်ဆိုတာလည်း စွန့်ခွာအောင်ဖန်တီးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို ကိုယ့်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာပဲနေချင်မှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေ့မယ့်လည်းနေလို့မရအောင်အခြေအနေ တွေကဖြစ်ခဲ့ပြီကို။
Posted by Mr. Programmer at 2/27/2007 07:50:00 AM
very nice this. goahead to write